मेरी स्टोप्स र नेपाल परिवार नियोजन संघ (एफपान ) नेपालको अध्ययनले घण्टामै ३३ भ्रुणहत्या हुने गरेको तथ्य सार्वजनिक भएको छ । यसको अर्थ दिनमा ७९२ र वर्षमा २ लाख ८९ हजार ८० सय भ्रुणहत्या हुने गरेका रहेका छन् । यो त वैध र दर्तावाला भ्रुणहत्या भए, अवैध र लुकिछिपी हुने भ्रुणहत्या जोड्ने हो भने नेपालमा भ्रुणहत्याको महामारी फैलिसकेको छ ।
कानुनत: गर्भपतन गर्न पाइने भएपछि खुलेआम रुपमा गर्भपतन गराउन जाने गर्छन् र संस्थाहरुले पनि गर्भपतन गराइदिने गर्छन् । ती संस्थाहरुको रिपोर्टमा भनिएको छ: पहिले पनि गर्भपतन हुन्थे तर गैरकानुनी रुपमा । त्यसैले रेकर्ड कायम हुँदैनथ्यो । अहिले कानुनले गर्भपतनको व्यवस्था गरेपछि रेकर्ड राख्दा यस्तो रिपोर्ट सार्वजनिक भएको हो । तर प्रश्न उठ्छ, यो तथ्याङ्क दुई संस्थाकोमात्र हो । यी संस्था बाहेक पनि अनेक स्थानमा गर्भपतन हुने गरेका छन् । ती सबै रेकर्डहरुलाई एकै ठाउँमा राखेर हेर्ने हो भने योभन्दा पनि कहालीलाग्दो यथार्थ प्रष्ट हुन आउने छ । भन्नुको अर्थ के हो भने गर्भपतन महारोग बनिसक्यो । गर्भपतन सामाजिक संस्कार बन्नथाल्यो है ।
किन गर्भपतनलाई सामान्य रुपमा लिने प्रचलन बढ्यो ? यसतिर विज्ञहरु र सरकारले समेत ध्यान दिन जरुरी छ । एकातिर महिला हिंसा र बलात्कारका घटना दिनदिनै बढिरहेका छन् भने अर्कोतिर गर्भपतन दिनमै यति ठूलो संख्याले गराउन थालेका छन् । कतै नेपाल खुला समाजतिर अग्रसर भएको त होइन ? हो भने नेपाली संस्कार र संस्कृति बिनास हुनथाल्यो भनेर मान्दा हुन्छ । पश्चिमी समाज र सभ्यताको खुलापनले नेपाललाई नराम्ररी गाँजेर प्रभावित पारेको छ भन्ने मान्नका लागि गर्भपतनको संख्याले कर लगाइरहेको छ ।
कानुनले गर्भपतनको समय किटान गरेपछि र कानुनी मान्यता दिएपछि खासगरी बढ्दो चढ्दो उमेरका युवतीहरुका लागि सजिलो भएको छ । स्कूल, कलेज पढ्न जाने, त्यही उमेरमा डान्स बारहरुमा जाने र हात हातमा मोवाइल र घर घरमा ल्यापटप हुने हुनाले यौन उत्तेजना हुने खालका फोटो, फिल्म, पोर्नोहरु हेर्ने बानी परेकाले पनि यौनेच्छा पूर्ति गर्दा गर्भ रहन जाने र तिनीहरु नै बढीमात्रामा गर्भपतन गराउनु पर्ने बाध्यतामा रहने गरेका छन् । रेकर्ड अनुसार उमेर हेर्दा पनि गर्भपतन गराउनेको उमेर कलिलै देखिने गरेको छ । यो समाजका लागि अत्यन्तै डरलाग्दो विषय हो । यिनै युवाजमात भोली गएर देशका शासक, प्रशासक बन्ने हुन्, यही बर्ग यसरी गर्भपतन गराउने समस्याबाट अघि बढेका हुने हुनाले भोलिको स्थिति कस्तो होला ? त्यसैले गर्भपतनको यो भयानक स्थितिलाई न्यूनिकरण गर्नका लागि निश्चय नै समाजशास्त्री, सरकार र विज्ञ समूहले चेतना बढाउने योजना ल्याउन जरुरी छ । अन्यथा समाजमा नराम्रो असर पर्न जानेछ । हो, गर्भपतनको यो रेकर्डमा केही जघन्य अपराधहरु पनि हुने गरेका छन् । गर्भ जाँच गर्ने र छोरी रहेछ भने पतन गराउने अपराधमा नागरिक र डाक्टर पनि सामेल हुने गरेका छन् । यो त झन जघन्य अपराध हो । यस्ता अपराधलाई रोक्नका लागि खासगरेर डाक्टर नै सतर्क हुन जरुरी छ । कानुनको पालना गराउन सरकारको सक्रियता जरुरी छ ।